Wasiirka Ganacsiga Oo Saxeexay Siyaasad Saamaynaysa Dhaqaalaha Somaliland | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wasiirka Ganacsiga Oo Saxeexay Siyaasad Saamaynaysa Dhaqaalaha Somaliland
Wasiirka Ganacsiga Oo Saxeexay Siyaasad Saamaynaysa Dhaqaalaha Somaliland
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska JSL Mudane Maxamuud Xasan Sacad (Saajin) ayaa si rasmiya u saxeexay Siyaasadda Meharadaha Wadhatada , Yaryar iyo Dhexe oo looyaqaanno sidoo kale MSME Policy. Siyaasaddan ayaa ay dhawaan golaha Wasiiraddu ansixiyeen si ay wax uga qabato dhaqaalaha Somaliland ee il-kaliyaalaha ku tiirsan Xoolaha nool oo kaliya.
Qoraal uu Wasiirka Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiisku horudhac uga dhigay Siyaasaddan ayaa u dhignaa sidan soo socota :
Meheradaha Wadhatada, Yaryar, iyo Dhexe (MWYDH) waxay ka koobanyihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha, waxayna sameeyaan ilaha ugu balaadhan ee shaqaaleynta iyo hanti-abuurka sida ku cad Qorshaha Horumarinta Qaranka II.
Horumarinta Meheradaha noocan ah (MWYDH) ayaa loo arkaa inay kamidyihiin hababka joogtada ah ee loo isticmaali karo inay yareeyaan saboolnimada iyo hagaajinta tayada nolosha qoysaska. Kaalinta MWYDH ee horumarinta dhaqaalaha joogtada ah ayaa hadda loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu firfircoon qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha, waxayna soo bandhigaan fursado lagu xaqiijinayo horumar ballaaran oo loo dhanyahay. Meheradahani waxay fududeeyeen ka qaybqaadashada dhaqalaaha ee kooxaha laga faquuqay horumarka dhaqaalaha wadanka , sida dumarka iyo dhalinyarada iyagoo u fura fursado intii hore ka badan, iyo iyagoo dhanka kale taageera koritaanka deegaanada ka hadhay koboca dhaqaalaha wadanka intiisa kale.
Hadaba, Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiisku waxay diyaarinaysaa qaab-fulineed dhamaystiran oo xaqiijinaya hirgalinta saxda ah ee siyaasaddan, iyada oo sidoo kale ay kaqayb qaadanayaan dhammaan dhinacyada daneeyayaasha ah ee ku lugta leh hirgalinta siyaasaddan.
Waxaan aad uga mahad celinayaa doorka ay ka qaateen Hay’adaha Dawliga ah, Ganacsatada iyo saaxiibadeena dhanka horumarka dhamaystirka siyaasaddan.
Ugu dambeyntii, waxaan u mahad celinayaa masuuiyiinta Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska sida wanaagsan ee ay u hogaaminayeen geeddi-socodka dhamaystirka siyaaasadda.
Previous articleAtoore caan ah oo la toorriyeeyay isagoo masraxa taagan
Next articleWargeyska caanka ah ee The Indian Ocean oo daabacay in wadhadal hoose u socdo dawlada somaliland iyo dublamaasiyyin ruush ah, yaase ka shaqeeyay